Mini danpon laser, Shanghai module oluhlaza, Laser Module - Jiabei
Laser Green Isikhombi
Shanghai JIABEI INSTRUMENTS COMPANY esungulwe ngo-2003, kuyinto ibhizinisi ihlanganiswe ucwaningo kanye nokuthuthukiswa, ekukhiqizeni nokudayiswa kwemikhiqizo laser izwe inhlolovo umkhakha. Imikhiqizo yethu zihlanganisa amazinga laser, laser amamojuli, laser izikhombo namanye izesekeli ahlobene e wokwakha. Akhiwe yedolobha lanamuhla Shanghai okuyilona elisebenzayo futhi omunye komuzi kunazo amahle izilomo China.
Vh-3D Green 12 Lines 360 ° Kuqondile & Horiz ...
Vh-30G Mini Green Omunye Kuqondile Line
Vh-30R Mini Red Omunye Kuqondile Line
Yiziphi izinhlobo ezingeni umoya
1 .. Ukwahlukanisa ngokuvumelana nesimiso zokusebenza (1) Mechanical umoya ezingeni Mechanical ezingeni zingahlukaniswa zibe izinhlobo ezintathu: ibha ezingeni (owaziwa nangokuthi Fitter ezingeni), ifreyimu ezingeni nasezingeni iqembu. Basuke kuboniswa ezingeni bubble, ngakho izinga mechanical ubizwa nangokuthi ezingeni ezingeni noma bubble hlobo. UMoya ezingeni. Izinga strip Umoya unxande ezingeni wokulinganisa insimbi base yokulinganisa kwamanzi, bubble ezingeni eqondiswa noma kungase kushintshwe isihlobo kuya base yokulinganisa surfa ...
Kanjani ezingeni umoya usebenza
Izinga tube ezingeni umoya senziwa ngengilazi. Udonga engaphakathi tube ileveli surface lwalugobile nge endaweni engaba ezithile ugobile. I tube iqukethe ketshezi. Lapho izinga esitshekile, Bubbles bathuthe ezingeni tube kuya ekupheleni ezingeni ukucacisa isikhundla ezingeni. I emikhulu engaba ugobile odongeni engaphakathi ezingeni umoya, ayanda isinqumo, kanti elincane engaba ugobile, le ukwehlisa isixazululo. Ngakho-ke, lo engaba ugobile s ...
Yiziphi izindlela ukuhlolwa ezingeni?
A level kuyinto evamile ithuluzi wokulinganisa sokulinganisa engeli encane. Esikhathini umkhakha mechanical ithuluzi yokukhiqiza, isetshenziswa ukukala ukuthambekela engela ngokuhlobene evundlile, le planeness futhi straightness somhlahlandlela wesitimela of imishini umshini ithuluzi, yindawo evundlile futhi ime mpo yokumiswa imishini, njll Ngokulandelayo, ngizo- ukuchaza ulwazi ezingeni ngokuningiliziwe. 1. A emfushane isingeniso ezingeni ezingeni A kuyinto evamile ithuluzi wokulinganisa sokulinganisa ezincane ...
esethembekile , Ubude Station , 360 rotary Laser Level Green Beam , Ipoto Yennyawo Ezintathu , Wall Bracket , Laser Khanyisa ,